जुँगा भएकी राजकुमारीले प्रेम अस्वीकार गर्दा १३ पुरुषद्वारा आत्महत्या « Janata Samachar
प्रकाशित मिति :5February, 2019 6:57 pm
काठमाडौं । के हो सुन्दरता ? आम मान्छेको दिमागमा आउँछः चटक्क अनुहार, मिलेको शरीर, उचो कद ? सामान्यतया हामी सुन्दरता देखिने कुरामा यिनै विषय तुुलना गर्छौँ । तर सुन्दरता देखिने कुरा मात्रले मापन गरिँदैन भन्ने पाटो इतिहासको एउटा घटनाले प्रष्ट पारेको छ ।
वास्तवमै सुन्दरता एउटा अनुभूति मात्र हो हामी भन्न सक्छौँ र हामीले एकपटक मन पराएपछि सुन्दर शरीर, सुन्दर रुपको कुरा गर्न छाडछौँ । हिन्दीमा भनाइ नै छ, ‘गधे पे दिल लगी तो परी क्या चिज है !’ अर्थात् गधासँग नै प्रेम भएपछि हामीलाई परीको पनि वास्ता हुँदैैन । परी भन्दा गधा नै मन पर्न थाल्छ ।
सन्दर्भ १९ औँ शताब्दीको शुरूतिरकाे हो । जतिबेला पर्सिया (हालको इरान) का राजा नासिर अल–दिन शाह कजार थिए । राजाका १२ औँ छोरीको नाम थियो राजकुमारी जाह्रा खानुम, ताज अल–शल्तनेह । पछि उनै राजकुमारी कजारका रुपमा विश्व चर्चित भइन् । वर्तमान सुन्दरताको परिभाषा भन्दा कजार निकै भिन्न थिइन् । उनको अनुहारमा रौँ थियो । स्पष्ट देखिने गरी पुरुषको जस्तै जुँगा थियो । कजार नारीवादी थिइन् । उनका लेखमा नारी अधिकारको कुरा ज्यादा हुन्थे । साथै उनीले जहिलै पनि सुरक्षित मातृत्व वकालत गरिन् साथै उनले आफ्नो लालनपालनमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाइन् । इतिहासकारहरुका अनुुुसार, राजकुमारी कजारको जन्म सन १८८४ मा भएको थियो र उनको मृत्यु सन १९३६ मा भएको थियो । उनको तीनपटक विवाह भएको थियो । पहिलो र दोस्रो पतिसँग उनको डिभोर्स भएको थियो । (एजेन्सीको सहयोगमा)